Ulwandle lwaBucala-Cashew Nut Cove Windcatcher House! - I-Airbnb
Ulwandle lwaBucala-Cashew Nut Cove Windcatcher House!
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguChip
Yakhelwe kwisitayile sasentshona, sineempembelelo ze-SE Asia, ikhaya lethu libonelela ngazo zonke izidalwa ezitofotofo zekhaya, nazo zonke iindawo zokuhlala esiqithini. Gqibezela ngekhitshi yesitayile sasentshona, amanzi ashushu nabandayo acocekileyo acocekileyo, akukho nto iyenye ifana nayo eKoh Lipe. Yonwabela esakho izitepsi saBucala, ukuya kuLwandle lwethu lwaBucala, apho ukutshona kwelanga kuyamangalisa. Eli lelinye lethuba elihle kuKo Lipe.
Indlu yeWindcatcher yenzelwe ukwenza kanye loo nto, ukubamba umoya. Kwangosuku olupholileyo, ukuba uvula zonke iifestile kunye neengcango zeglasi ezityibilikayo, indlu iya kudala umoya wayo.
Njengokuphela kweKhaya laBucala elikhoyo kwesi siqithi, eli lithuba lobubele ngokwenene. Ikhaya lethu libonelela ngabo bonke ubutofotofo bekhaya, kwaye yindawo ezolileyo kakhulu ukuba kuyo. Ukuba ufuna imfihlo, le yindawo yakho. Yonwabela ezakho izinyuko zabucala ukuya kuLwandle lwethu lwaBucala, apho uya kungqina ukutshona kwelanga okumangalisayo phantse ubusuku ngabunye. Kananjalo sinendawo entle yokuphulula kumgangatho ophambili, enemibono engakholelekiyo, ephinda kabini njengebhedi yobukhulu bukakumkanikazi. Phantse kusoloko kukho umoya ovuthuza endlwini, ngoko nangona ikhaya lethu lineeyunithi ezi-4 zomoya, asifane sizifumane ziyimfuneko. Ikhaya lethu lilala ngokukhululekileyo abantu abadala aba-6, kunye nabantwana aba-4, kuxhomekeke kwiminyaka, kunye nobukhulu. Sinciphisa inani elipheleleyo lokuhlala lingabi ngaphezu kwe-8 yabantu bebonke, kubandakanywa bonke abantu abadala kunye nabantwana. Sinebhongo kakhulu ngeli khaya lethu, yaye ekubeni singenako ukuba lapho unyaka wonke ukuze silinandiphe, siye sagqiba kwelokuba sabelane nabanye ngalo.
Ikhaya lethu likwaxhotyiswe ngamanzi ashushu nabandayo kuyo yonke itepu kunye neshawari. Sivakalelwa kukuba kufuneka amanzi acocekileyo afumaneke kwiindwendwe zethu.
Ukuba ujonge indawo ekuchithelwa kuyo iiholide, enabantu abaninzi, ayiyondawo yakho le. Ukuba ungathanda ukuba namava oxolo kunye nokuzola okunokunikelwa nguLipe, ke le yindawo yakho. Samkela amaqela eentsapho ezimbini ezinqwenela ukuhlala phantsi kophahla olunye, endaweni yokuhlala iibungalows ezininzi ezahlukeneyo. I-Koh Lipe iyaqhubeka nokukhula, ke ukuba ufuna imfihlo, le yenye yeendawo ezimbalwa zabucala ezishiyekileyo esiqithini.
I-Koh Lipe sisiqithi esihle esingenayo yonke ingxolo eqhelekileyo kunye nokuxinana okufumanayo kwiindawo ezininzi zaseThailand kwezi ntsuku. Nangona unokuhamba ujikeleze isiqithi sonke ngaphantsi kweyure enye, indawo yethu yeyona ndawo ikuphela kwayo eLipe apho ungenakubona nayiphi na enye indawo eLipe, kuyo nayiphi na ifestile ekhayeni lethu. Kumganyana nje omfutshane wemizuzu esixhenxe ukuya kwisitrato esihambayo, kodwa xa ukwikhaya lethu kuba ngathi nguwe wedwa abantu kwesi siqithi. Ngamava obubele ngokwenene.
Ekubeni sirenta kuphela ikhaya xa singasebenzisi, ngelishwa mhlawumbi asiyi kuba nalo ithuba lokudibana nondwendwe lwethu, kodwa siyawaxabisa nawaphi na amagqabaza abhalwe kwincwadi yethu yeendwendwe. Siceba ukwakha enye indlu yeendwendwe kule propati, kwaye sijonge phambili ekubeni sikwazi ukwabelana nabo ngamava ethu.
Ekubeni sirenta kuphela ikhaya xa singasebenzisi, ngelishwa mhlawumbi asiyi kuba nalo ithuba lokudibana nondwendwe lwethu, kodwa siyawaxabisa nawaphi na amagqabaza abhalwe kwincwad…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Koh Lipe